भ्रष्टाचार महारोगको रुपमा फैलिएको र मौलाएको छ । सामाजिक सुरक्षा गम्भीर बनेको छ । दिनानुदिन ८ महिनाकी अबोध शिशुदेखि स्कुले नानी, किशोरी, हुँदै वृद्धासम्म बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या र बेचबिखन शृङ्खलाबद्ध भइरहेको छ । बेरोजगारीका कारण रोजगारीका लागि दिनानुदिन युवा जनशक्ति खाडी मुलुकमा सस्तोे मूल्यमा श्रम बेचिरहेका छन् ।
जताततैै सिन्डिकेट नै सिन्डिकेट, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ठेक्कापट्टा, उपभोग्य वस्तु किनबेच मात्रै होइन हरेक स्रोत–साधनमा सिन्डिकेटविनाको कुनै वस्तु र ठाउँ नै भेटिँदैन । शान्तिप्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा अझै कैयौँ निर्दोषहरु जेलमा छन् ।
कैयौँ आज पनि भूमिगत हुन बाध्य छन् भने बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । घाइते, अपांग, शहीदहरुको सम्बोधन गरिएको छैन । पानीजहाज र मनोरेलजस्ता महोत्वाकांक्षी योजना बाँड्ने सरकार काठमाडौँको फोहोर पन्छाउन सकिरहेको छैन । भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पीडितलाई राहत दिन र क्षतिको एकिन विवरणसमेत निकाल्न सकेको छैन ।
साथै सांसद–मन्त्रीहरुको दोहोरो सुविधा काण्ड, असारे विकास, बेरोजगारी समस्यामा उदासीन, चर्को कर, कृषि क्षेत्रमा उदासीन, बजार अनुगमनमा उदासीनताजस्ता विषयले सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता होइन, भ्रष्टाचार, सत्ता दोहन र क्षणिक शक्ति स्वार्थमा लिप्त भएको स्पष्ट देखिन्छ । १०–२० हजार घूस खाएका कार्यालय सहायक, खरिदार र सुब्बालाई पक्रिने र अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने सत्ता/शक्तिवालाको कारिन्दालाई बचाउने खेलो गरिरहेको आभास भइरहेको छ, जसका कारण विविध काण्डहरु उजागर भइरहेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । वाइडबडी प्रकरणको कुरा विगत केही महिनाअगाडिदेखि आइरहेको थियो । पर्यटनमन्त्रीले कहिले ‘भाडामा हो या किनेको, मलाई थाहा भएन’ भन्ने र कहिले ‘किन्ने प्रक्रिया मभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरुले नै शुरु गरेको, मैले त बाँकी किस्ता मात्र स्वीकृत गरेको हुँ’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार तर्कहरु पेस गर्दै आइरहेका थिए ।
उपसमितिले अनियमितता भएको ठहर गरेपछि यो भ्रष्टाचार लुकाउन सरकारले सिंगो बल खर्चिएको छ । यो भ्रष्टाचार छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई नदिएर सरकारले नै छानबिन समिति बनायो । काण्डैपिच्छे सरकार आफैँ छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगको औचित्य के हो ? किन यो काण्डको छानबिन अख्तियारमा नपठाएर छुट्टै समिति सरकारले नै बनायोे ? के यो समिति संवैधानिक हुन्छ त ? कतै वाइडबडी काण्डमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई लत्याउँदै असंवैधानिक ढंगले छानबिन समिति बनाएर भ्रष्टाचार लुकाउन गरेको नाटक अनर्थ त साबित हुनेछैन ?
दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल एक्जिएटाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी छ । गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८ सय १५ रुपियाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रपछि एनसेलले यसअघि नै १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरिसकेकोले बाँकी १५ प्रतिशतका दरले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार रुपियाँ मात्र आफूले तिरे पुग्ने दाबी गरेको छ । यसरी कर निर्धारण गर्ने तागत व्यापारिक कम्पनीलाई कसरी आयो ? कर राज्यले निर्धारण गर्ने हो कि कम्पनीले ? प्रश्न गम्भीर छ । व्यापारी र कर्मचारी शक्तिका सबैभन्दा ठूला पुजारी हुन् । नाफा र सुविधाका लागि शक्तिशालीहरुको गुलामी गर्न व्यक्तिगतरुपमा लगानी गर्दछन् । त्यो लगानी उठाउन राज्यको स्रोतलाई दोहन र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सतहमा आइरहेका छन् । एनसेल एक्जिएटाले राजनीतिक संरक्षणमै आयकर निर्धारण गरेर राज्यसँग कर छल्न खोज्दै छ ।
राज्यको स्वामित्वमा रहेको कैयौं जग्गा माफियाको अधिकारमा परेको घटना नौलो होइन । पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिक पहुँचमा भएकाहरुले जोताहा, सुकुम्बासी, निमुखा, असहायहरुको उठिबास पार्दै एउटाको स्वामित्वमा रहेको र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिन बेचबिखन र आफ्नो नाममा दर्ता गर्दै आइरहेका थिए ।
अब हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा किनबेच भइसकेछ । सत्ताका पहुँचवालाहरुले नै त्यसको हकदार बनिसकेका छन् । राज्यभन्दा जग्गा दलाल बढी शक्तिशाली देखियो । शक्तिशाली दलालहरुको पहिचान गरी नमुनायोग्य काम गरेकोमा कदर गर्दै राष्ट्रिय पदवी दिन राष्ट्रपतिज्यूकोमा पक्कै लाम लगाउनुहुन्छ नै होला ! त्यति मात्रै होइन, खुलामञ्चसमेत सत्ताका मतियार माफियाको मिलेमतोमा कब्जा गरेका छन् । काठमाडौंलाई प्राणवायु र जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने ऐतिहासिक मञ्च हो ।
यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा समेत गिद्धे नजर लगाउनेहरुले भित्रभित्रै यो देश कति लुछेका होलान् ? देशैभरि सरकारी जमिनको बिक्री वितरण, ठेक्कापट्टामा राज्यस्रोतको दोहोन गरी व्यक्ति र सत्ताहितमा प्रयोग गर्नु जघन्य अपराध र देशद्रोह हो । सत्ता र शक्तिको आडमा राजनीतिक खोलभित्र हुने अपराधले देश र जनताको हुर्मत लुटेको छ अनि लोकतन्त्रलाई बदनाम पारेको छ । बदलिएको व्यवस्थाभित्र नबदलिएको चरित्रले देश खोक्रो पार्दै छ ।
लामो समयको जहानिया राणा शासन, पञ्चायत व्यवस्था अनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको दबदबामा रहेका नेपाली जनता स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तामा सम्पूर्ण नागरिक भएर जिउने इच्छा–आकांक्षासहित पटक–पटकको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, सामाजिक अभियानहरुको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संघीय लोकतन्त्रको घोषणासँगै हामी राजाका रैति र प्रजाबाट मुक्त भएर गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक बन्यौँ । जनताका छोराछोरी निर्वाचन प्रक्रियाबाट देशको राष्ट्रप्रमुख बन्ने व्यवस्थाको स्थापना भयो ।
‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरुको पनि बाँकी राख्दैन’ भन्ने नेपाली उखान थियो तर ‘नयाँ बाँदरको जन्म’ले अरुको नराख्ने आफ्नो भने बनाउने चरित्र बोकेका कारण देश यो दुर्दशामा रुमल्लिएको छ । फेरियो व्यवस्था, फेरिएन शासकीय चरित्र । शासकीय चरित्र फेर्न र राज्यलाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिन बृहत् बहस एवम् पहल आजको अपरिहार्यता बन्न पुगेको छ ।
तर राष्ट्रपतिको भूमिका, चिन्तन, कार्यशैली, सुविधा, स्रोत–साधनको दोहन, राजाकै शैलीमा देखिनु संविधानको मर्म र जनताको भावना विपरीत छ । राजालाई हिन्दू धर्मको प्रतिक मानेका कारणले राजा मठ–मन्दिर धाउँथे । विष्णुको अवतारको रुपमा राजा मान्नेहरु टीका र आर्शिवाद थाप्न जान्थे । पारिवारिक सत्ताका कारण राजा ऐस, आराम, धनदौलत, अगुवा–पछुवा, भाइभाइदारको घेरामा बस्थे । राष्ट्रपति त जनताले चुनेका हुन् नि ! किन टीकाको थाली लिएर आफ्नो अगाडि घुँडा टेकाई राष्ट्रपतिले टीका लगाइदिने, मठमन्दिर धाउने ?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु मात्र होइन स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी र सदस्यहरुमा समेत गाडी, तेल, आकर्षक तलब भत्ता, विदेश सयरले प्राथमिकता पाएको छ । सबै तहका सत्तामा यस्ता कुरा झाँगिएको छ । जनतालाई चर्को करको भारी बोकाइएको छ ।
जनताले तिरेको करबाट ७८ प्रतिशत अनुपयोगी काममा खर्च गर्न सक्नेहरुले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ । एकपटक उच्चपदमा पुगेपछि जीवनभर गाडी, घर, सुरक्षा गार्ड, तेल, कर्मचारी सुविधा लिने अनि राज्यकोषबाट करोडौं उपचार खर्च गर्ने मुलुकमा देश समृद्ध र जनता सुखी हुन सक्छन् ?
जीवनभर राज्यकोषबाट सुविधा खानेहरु दशौं–बीसौं वर्ष मन्त्रालय छानी–छानी मन्त्री हुने, मन्त्री हुँदा स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने अनि राजनीति सेवा हो भन्ने ? समानुपातिक कोटा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेहरुका लागि प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै एकपटक होइन चार–पाँचपटक नेताका आसेपासे र परिवारलाई समानुपातिक कोटामा नियुक्ति गर्ने ? यही विधि हो समाजवाद, राजनीतिक नैतिकता ? राजनीतिमा नैतिकता बेच्नेहरुका कारणले इमानदार र सेवामूलक राजनीति गर्नेहरुको समेत हुर्मत लुटिरहेको छ ।
सरकारको काँधमा सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको तीव्र गतिमा दौडाउनुपर्ने कार्यभार थियो र आज पनि छ । तर, यो सरकार निरन्तरतामा रमायो । जहानियाँ, भाइभारदारी चिन्तनमा रुमिल्लयो । लोकतन्त्रको भजन गाएर एकाधिकार चलाउँछु भन्ने धृष्टता गरिरहेछ । जसको कारण भ्रष्टाचार र सामाजिक असुरक्षाका काण्डैकाण्डको डुंगुर थुप्रिएको छ ।
आसपासे पुँजीवादको नग्न अभ्यासले नागरिक र राष्ट्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारिएको त छँदै छ, आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने पार्टी भित्रभित्रै पनि भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको छ ।